वि’वाहपछि च’म्किन्छ यी राशी हुने व्यक्तिको भाग्य ! - Babal Khabar
प्राय:जसो मानिसहरु विवाह गरेपछि वा विवाह नहुनुअघि निकै नै फरक हुन्छन्।
कुनै मानिस विवाह गरेपछि निकै नै खुसी हुन्छन् भने कुनै मानिस निकै नै निराश हुने गर्छन् ।
विवाह पछि भाग्य र परिवर्तन यस राशीको मानिसको जीवनमा विवाहले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ।यो राशी हुनेहरुको भाग्य विवाहपछि खुल्नेछ ।
विवाह गरेपछि यीनीहरुले जुन काममा हात हालेपछि सफल हुनेछ।कर्कट राशी हुने मानिसहरुले आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गरिरहने बानी हुन्छ । यो राशीका मानिसहरुएकदमै परिश्रमी र इमान्दार हुन्छन्।
हो, शास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरूलाई सम्पन्नता र समृद्धिसँग स’म्बन्धित छन् भनिएको छ । आउनुहोस्, आज हामी तपाईंलाई ५ त्यस्ता रूख र बोटहरू बताउँदैछौं जसले तपाईंको घरमा पैसाको ओईरो लाग्नेछ ।
यो उत्तम छ कि तपाईं यसलाई घरको सट्टा बार्दली वा बरान्डामा राख्नहोस् । यस कारणले गर्दा, घरमा सधैंका लागि शान्ति र खुशी रहन्छ । विषेश खोजका साथ जो कोही मानिसलाई उपयोगी यो सामाग्री तयार पारेका छौ । आशा छ । तपाई आफुले पढिसकेपछि अरुका लागि सेयर गरिदिनुहुनेछ । साभार बुलबुल पोस्टबाट साभार गरियको खबर ।
Prevमन परेको मान्छेलाई फकाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् है उपायहरू
nextदही खाने गर्नुभएको छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला, यस्तो बन्दै छ हजुरको शरीर ! डाक्टरको भनाइ यस्तो छ